Soomaalida iyo Oromada Itoobiya oo heshiis kala saxiiday iyo Arrimo Xasaasi ah o ay ku wada heshiiyeen | Wararka Jubbaland
Soomaalida iyo Oromada Itoobiya oo heshiis kala saxiiday iyo Arrimo Xasaasi ah o ay ku wada heshiiyeen
Maamullada dowlad Goboleedyada Itoobiya ee Dhulka Somalida ay Itoobiya heysato iyo Oromada ayaa gaaray heshiis nabadeed kaddib dagaallo labbada maamul dhexmarayay sanadihii la soo dhaafay.
Inta badan waxaa ay ku muransanaayeen sohdinta dhulka ah iyaga oo dad ka badan 400 Qof iska dilay intii ay socdeen dagaallada u dhaxeeyay labada dhinac.
Muranka u dhaxeeya labada dhinac ayaa waxaa uu ka dambeeyay kaddib markii ay isku qabsadeen dhul bedkiisu gaarayo 147 KM oo xadka labada dhinac ah islamarkaana qolo kasta ay u magacaawday maamul iyada taabacsan oo halkaas ka jira.
Hoggaamiyaha dowlad degaanka Oromada Waddanka Itoobiya Lemma Megersa,ayaa sheegay in heshiiska ay kala saxiixdeen qowmiyadaha walaalaha ah uu yahay guul u soo hoyatay shacabka labada dhinac oo ah dad wax badan wadaaga.
Waxaa uu ku baaqay in la joogteeyo heshiiskan waxaana uu dhankiisa ballan qaaday in aysan dhankooda colaad dambe kaga iman doonin Soomaalida.
Sidoo kale Hoggaamiyaha Dowlad degaanka Somaliya Itoobiya CAbdi Maxamuud Cumar oo dhankiisa heshiiska saxiixay ayaa sheegay in sidoo kale iyagana ay ballan qaadayaan nabad gelyada degaanka labada Qowmiyadood.
Wasiirka Reer Miyiga iyo arrimaha Federaalka Itoobiya Kassa Teklebirhan,ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ah ay tan 2013kii ka shaqeyneysay sidii loo gaari lahaa heshiiskan oo kalena,maantana ay ku faraxsanyihiin in labada Maamul ay heshiis rasmi ah.